Muqdisho oo dhac loogu qeystay Dad Shacab ah - Awdinle Online
Muqdisho oo dhac loogu qeystay Dad Shacab ah
May 18, 2020 (Awdinle Online) –Magaalada Muqdisho gaar ahaan Xaafado ka tirsan degmooyinka Howl-Wadaag iyo Warta-nabada maalmihii la soo dhaafay dadka ku nool waxaa kasoo yeereysay cabasho ku aadan inay jiraan Kooxo hubeysan oo dadka Shacabka ah dhac u geysanaya waqti walba.
Dadka Shacab ah ayaa waxaa ay sheegeen in Rag hubesan oo wata gaadiidka loo yaqaano Mooto Bajaajta ay habeen iyo Maalin dhac u geysanayaan dadka Shacabka ee ku nool degmooyinka Wartanabada iyo howl-Wadaag.
Qaar kamid ah dadka dhaca loo geystay ayaa waxaa ay sheegeen in ragga dhaca geysanaya oo bustoolado ku hubeysan ay kuu wadayaan qaab afduub ahaan,iyaga oo kuu sheegaya inay yihiin Ciidamo ka tirsan dowladda lagaana shakiyey,hayeeshee kadib kaa qaadanaya wax alaala wixii aad heysato.
Mid kamid ah dadka dhaca loo geystay ayaa sharaxaad ka bixiyey dhacdadii ugu dabeeysay ee ka dhacday meel aan ka fogeen Isgoyska laba dhagax ee Magaalada Muqdisho dad badana looga qaatay Mobeelo ay isticmaalayeen.
Markii ay dadka Shacabka ah ee sheegaya in rag hubeysan oo sheeganaya inay ka tirsan Ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa Nabadsugida ay dhac u geysnayaan ayaan waxaan la xiriirnay Booliska Soomaaliya,hayeeshee ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan.
Previous articleMadaxweyne John Magufuli oo jeediyay khudbad yaab leh
Next articleGolaha Wasiiradda Hir-shabeelle oo lagala Hadlay Xaalada Baladweyne ku jirto